बुटवलको कपरकट्टीमा डुंगा सररर... :: Setopati
बुटवलको कपरकट्टीमा डुंगा सररर...
सेतोपाटी संवाददाता बुटवल, फागुन १७
बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत वर्षदेखि व्यवस्थित गर्न थालेको वडा नं. १६ बैठउलियास्थित कपरकट्टी तालमा डुंगा चल्न थालेका छन्।
पहिलेदेखि नै सानो पोखरीसहितको सिमसार र पानी जमेको स्थानलाई व्यवस्थित गरी उपमहानगरपालिकाले महत्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा विकास गरेको हो।
स्थानीयको अतिक्रमणमा पर्दै जाँदा यो ताल साघुरिँदै गएको थियो भने वरिपरि झाडीले ढाकिएको थियो। तर अहिले संरक्षण गर्न थालेपछि आकर्षक बनेको छ।
जलकुम्भी र झाडी सफा गरी चिटिक्क पारिएको तालमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिहीबार डुंगा सयरको शुभारम्भ गरेका हुन्। घुमफिरको संस्कृतिलाई समृद्धि, सद्भाव र एकतासँग जोडेर तीनै तहका बीचमा सहकार्यका साथ अभियान सञ्चालन गर्न जरूरी रहेको बताइएको छ।
थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको सो गाउँमा थारु समुदायले नै प्रयोग गर्ने खानाका परिकार खुवाउन सके पर्यटकको आकर्षण बढ्न सक्नेछ।
ताललाई थप व्यवस्थित बनाउन वरिपरि हरियाली, फुटपाथसँगै मौलिक संस्कृतिका विश्रामस्थल बनाउने र त्यहाँसम्म पुग्ने बुटवल चक्रपथलाई अझ व्यवस्थित गरेर सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
यो ताल प्राकृतिक सिमसार रहेपनि स्थानीयको अतिक्रमणमा पर्दै जाँदा सात बिघामा खुम्चिएको थियो। अहिले तालको क्षेत्र बढाएर २४ बिघा पुर्‍याइएको छ। अहिले यो ताल झण्डै दुई किलोमिटर लामो र करिब ३ सय मिटर चौडाइमा फैलिएको छ भने तालको गहिराई पनि करिब पाँच मिटर बनाइएको छ।
नील दहका नामले चिनिने र स्थानीय थारु समुदायले थकाइ मेट्नका लागि आएर बस्ने यो ताल क्षेत्र झण्डै सय वर्ष पुरानो मानिन्छ। सिमसार क्षेत्रको यो ताललाई उपमहानगरपालिकाले बुटवलको अमूल्य सम्पदा मानेर प्राथमिकता साथ संरक्षण गर्दै अहिले पर्यटकीय गन्तव्य बनाएको छ।
उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. १६ का अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा ताल संरक्षणका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याउँदै पहिलो कामको सुरुआत गरेको थियो।
तालसँगै नजिकै रहेको नरेनापुर धाम परिसरलाई पनि जोडेर आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने काम जारी छ। यो ताल परिसरमा वन हाँस, वन कुखुरा र जलेवाजस्ता चराचुरुङ्गी समेत पाइन्छन्।
बुटवलका पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा जितगढी, मणिमुकुन्द सेन दरबार भग्नावशेष क्षेत्र, हिलपार्क, पिसपार्क, मिलनपार्क, नरैनापुरसँगै अब यो प्राकृतिक ताललाई पनि जोडेर एकीकृत पर्यटन विकासका काम अगाडि बढाइने बुटवल सहरी विकास महाशाखाले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १७, २०७६, ०४:२५:००
ज‍ुम्लामा दैनिक ९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने (तालिकासहित)
२५ ग्राम ब्राउनसुगरसहित झापाबाट तीन पक्राउ
कोरोना महामारीबीच २०२० मा २.३ प्रतिशतले बढ्यो चिनियाँ अर्थतन्त्र
वर्षौंपछि चितवनको रिउखोलामा भेटियो जाडो छल्न युरोपबाट आउने ‘डनलिन’
संसद विघटनविरूद्ध भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चमा उठाएका पाँच प्रश्न
बाइडेनका चिफ अफ स्टाफ भन्छन्- डेढ महिनामा थप एक लाख अमेरिकीको कोरोनाबाट मृत्यु हुन सक्छ
विश्वको दोश्रो अग्लो हिमाल केटुमा १० नेपालीले रचे इतिहास, हिउँदमा पहिलो पटक आरोहण
एक्कासी पर्यटकीय स्थल बनेको ‘पाताल दरबार’ (तस्बिरहरू)
पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सौराहामा सेल्फी प्वाइन्ट
गुमनाम अन्नपूर्ण आधार शिविर
जाने होईन त गोसाईकुण्ड, हलेसी र लाङटाङ हेलिकप्टरमा?
भिजिट कर्णालीको प्याकेज: हिउँमा खेल्न जाउ रारा
जागिरे ‘गृहिणी’ ! यमुना अर्याल (काफ्ले)
‘सेटिङ हो साथी सेटिङ, देश नै सेटिङमा चलेको छ!’ कान्ति न्यौपाने
काठमाडौंका घरबेटीलाई सोध्न मन छ- के काठमाडौंमात्रै नेपाल हो? वीरेन्द्र चौधरी
स्याउ बेच्ने प्रिन्सिपल सारा न्यौपाने
जागिरमा मात्रै भविष्य खोज्दा... प्रकाश कुमार सिग्देल
युद्ध समाप्त पार्न एक युद्ध जगदिस जोशी
लैंगिक विभेदको परिणाम शोभा पाठक